Hacking Google (မြန်မာ)
Posted by : ကိုထက် Tuesday, February 21, 2012
Google ကို အသုံးပြုပြီးတော့ လိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်လို ရှာဖွေရမလဲ ဆိုတာကို ရေးသားထားတာပါ . ရှာဖွေတဲ့နည်းတွေကတော့ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် . ဒီထဲမှာလဲ အတော်စုံပါတယ် . ဖတ်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ကလေးပါပဲ . လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။